Nyochaa: 'Grey Wolf', nke James Nava | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nyochaa: 'Grey Wolf', nke James Nava dere
Grey Wolf Ọ bụ akụkọ na-atọ ụtọ, ejiri ya na ikike, nke ji amamihe jikọta usoro akụkọ dị iche iche, ebe ịhụnanya, ọbụbụenyi, iguzosi ike n'ihe, kamakwa mmetụta uche na omume dị. Achoputara na akwukwo a mbuli elu nke ụkpụrụ mmadụ nke kachasị mkpa, jiri ọgwụgwọ rụọ ọrụ nke ọma na okike nke ndị odide ha.
James nava na-ekpughe na akwụkwọ akụkọ a nnukwu uche banyere mmadụ na nke okike. Edere ya na agụụ, ọ dị mfe ịbanye na akụkọ ihe mere eme nke Grey Wolf. Akwụkwọ akụkọ a jikọtara gị na mbido, na ọ bụghị n'ihi na m na-eme ihe n'ụzọ zuru ezu. N'adịghị ka. Nava malitere akụkọ ahụ n'ụzọ dị jụụ, na-enwe obi ụtọ na nkọwa nke gburugburu ebe obibi, ihe odide na, karịa ihe niile, ihe nkiri mbụ, mbido mbụ. Agbanyeghị, Nava na-ejikwa akụkọ banyere izu oke, na-eme ngwa ngwa n'oge kachasị ike.
Ọgụgụ Grey Wolf Enwere m mmasị karịsịa na nkọwa, karịsịa ndị nke ala dị iche iche na ihe okike nke Montana na Ugwu Rocky. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na akụkọ a na-eme na ebe akụkọ ifo, Wild Creek, obodo ahụ James Nava mepụtara na-emikpu gị n'ụzọ zuru oke n'ihe bụ ezi ime obodo ime obodo North America, n'ime ndị ya. M n'ezie ụtọ na ihe nkiri, karịsịa ndị nke anụ ọhịa wolf nọ na ya, ọ bụ ezie na ọ bụ obere ihe na-atọ ụtọ bụ ihe ngosi nke ọgụ ọgụ, ma ọ bụ ọbụna ihe ngosi nwere mmetụta anụ ahụ na nke agụụ.
1 Akwụkwọ ọgụgụ
2 Ihe odide
4 Nyocha ikpeazụ
Ebumnuche nke akụkọ a, nke kwesịrị ezigbo ihe nkiri ma ọ bụ usoro telivishọn, jupụtara na akụ ndị na-adọrọ mmasị. N'otu aka, anyị nwere nke akụkọ ịhụnanya nke ndị protagonists ya, Jason na Catherine, bụ́ ndị na-esite n’anụ ahụ́ kasị nwee mmetụta na-aga n’ihu, na-enwekwaghị ọchịchọ na echiche na-ezighị ezi. N'aka nke ọzọ, anyị nwere akụkọ banyere anụ ọhịa wolf, ndị ga-emeri iyi egwu abụọ na onye na-amaghị ama bụrụ isi akụkọ ahụ. Maka na a maghị ezigbo ihe kpatara akụkọ a ruo oge ọma na akụkọ ahụ, agbanyeghị na-eji nwayọ azụ abanye ya site na mkparịta ụka ndị edemede ya. Anyị maara ya n'ezie, n'ihi na ihe mkpuchi ahụ agwalarị anyị, ọ bụ ezie na ọ dị mfe ichefu ya ma ọ bụrụ na ị kwe ka ị bufere gị.
Akụkọ nke na-enye ahụ na akwụkwọ ahụ, n'ime ya agwakọta eyi ọha egwu e ndọrọ ndọrọ ọchịchị, naegosi oke ihe omuma nke onye dere ya banyere uwa a. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, James Nava sonyeere otu ndị agha na US Army mgbe ọ dị afọ iri na asaa na, na mgbakwunye na ịbụ nnukwu onye ama ama nke ndị agha pụrụ iche na ndị ọgụgụ isi nke obodo a, bụ onye ndụmọdụ ọkachamara na ndị America wee rụọ ọrụ dị ka ndị agha na onye ndụmọdụ ọgụgụ isi.
E gosipụtara mmasị miri emi nke onye edemede, ma na ọdịbendị a ma ama na nke ala, na akwụkwọ akụkọ a, bụ nke ụkpụrụ mmadụ nke ọ na-emekọrịtara na-egosipụtakwa na nke okike na nke obibi, na-asọpụrụ oghere ndị sitere n'okike, nke Nava na-ekwu dum na akụkọ a. Nnyocha ya zuru oke na mmasị ọ nwere iji nweta ihe ọmụma a pụrụ ịdabere na ya na-enye akụkọ a ntọala siri ike iji wulite akụkọ ahụ.
E kewara akwụkwọ 495 nke akwụkwọ ahụ na isi iri abụọ na ise - ekewa ya na ngalaba 133 - akwụkwọ edemede na ederede onye edemede. Akụkụ ahụ na-eme ka ịgụ ihe dị mfe, nke na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe ịgbaso. Usoro nke akụkọ ntolite na ụda nke ọ na-ewe na-enye ohere maka ndị niile na-achọ ịgụ obere obere - ma ọ bụ nwee nhọrọ karịa - na ndị na-eri akwụkwọ ma were ọtụtụ awa na-agụ akwụkwọ nwere ike ịnụ ụtọ ọgụgụ ha.
Ndị na-akwado ya, di na nwunye na-eto eto bụ ndị nwere mmasị na okike, anụ ọhịa na anụ ọhịa wolf, na-akwado akụkọ nke ịhụnanya na agụụ na-emetụta ihe niile, n'ụzọ ọ bụla. Ha abụọ meriri ihe mgbochi site na iguzosi ike na ụkpụrụ ha, ma jigide mmekọrịta nke ịkwanyere ibe ha ùgwù na-ebute ihe niile ụzọ. Zọ Jason Rovin na Catherine Rush nwere adọrọ adọrọ.
Onye ozo di nkpa n’ime akuko a bu obodo Sheriff. Enweghị m ike ịkọwa mana ihe aha agwa a metụtara m: sheriff Thorpe. Na mbu amataghị m ya, maka na m na-agụ ya na bekee, mana otu ụbọchị, anya m tụkwasịrị mkpụrụedemede ahụ n’agwaghị ọzọ, m wee gụọ ya dịka a ga-esi gụọ ya n’asụsụ Spanish. Ma ọ bụ ihe ọchị, n’ezie. Nke bụ eziokwu bụ na ntugheriukwu sheriff nwere ihe ọ bụla, ezi-abụghị, na m mere a obere ihe nnyocha na aha nke, o doro anya, na-abịa pụtara ihe dị ka "si obodo." Amaghị m ma Nava ọ ga-echeba nke a ma ọ bụ na ọ gaghị, mana ọ dị ka ọ dabara adaba.
Uzo ozo di nnukwu nkpa bu onye olu obodo, Ted Morgan III, tinyere ndi nile no ya gburugburu. Ọ bụghị naanị na ọ dị oke mkpa n'akụkọ ihe mere eme, mana iwu ya na-anọchite ihe niile na-adịghị mma gbasara agbụrụ mmadụ. Ọ na-egosipụta mmadụ kachasị njọ, yana ndị niile gbara ya gburugburu, ọkachasị odeakwụkwọ ya, onye na-anọchite anya ụdị nwanyị dị oke mkpa. A na-ewu ma na-edozi ihe odide abụọ ahụ nke ọma.
Isi ndị agha ahụ bụ agwa ọzọ dị oke mkpa. Nava mara ya nke ọma, n'ụzọ anụ ahụ na nke uche. A na-emeso ndị gbara ya gburugburu ihe omimi. Ọ dị ezigbo mkpa ịghọta akụkọ a. Ma enweghị m ike ịkọrọ gị karịa na-emebighị akụkọ ahụ.
M hapụrụ njedebe onye na-enye akụkọ ahụ aha ya na onye, ​​na-enweghị onye na-akwado ya kpamkpam, bụ etiti nke atụmatụ ahụ. Wolf wolf, ma ọ bụghị naanị onye ọ bụla, mana alpha nwoke, Sishika, anụ ọhịa wolf jikọtara na oge gara aga, ugbu a na ọdịnihu nke Wild Creek na akụkọ ihe mere eme nke onye protagonist. Oge nke nkịta a wolf pụtara na akụkọ ahụ bụ isi. Anwansi nile nke akuko a nwere, ghota site na mmetuta - ma obughi ihe di egwu - n'echiche, o nwere ekele maka nkita a.
Grey Wolf, Akwụkwọ akụkọ James Nava nke atọ, bu ụzọ bipụta ya na 2008. The 2014 reissue by Akwụkwọ sinipa na-agbasawanye mbipụta nke mbụ, na-agbake ederede ndị ewepụrụ na nke izizi ma na-agbakwunye ihe ọhụrụ iji mee ka akụkọ ahụ baa ọgaranya. Ihe mkpuchi ahụ, nke José del Nido mere, bụ ihe atụ nke na-ewepụta ọdịdị zuru oke nke ndị bụ isi.
Akwụkwọ nro ahụ dị nro nwere flaps yana ntinye edokọbara dị ezigbo mma na aka ma dịkwa mfe ijikwa, n'agbanyeghị nha ya. Typedị ederede a họọrọ, nha mpempe akwụkwọ na ntinye akara na-eme ka ọgụgụ isi gụọ ma nwee ike ịgụ na-enweghị ike ọgwụgwụ ogologo oge - ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma inwe ya.
Ekwesịrị m ikweta na m na-a "ụkarị “eri” ụdị akụkọ a na fim ma ọ bụ na telivishọn, nke a mere m ji chọpụta n'onwe m ụdị akụkọ na-atọ m ụtọ nke ukwuu ịgụ. Na mbido, o were m obere oge ka m banye n’afọ iri na ụma, kpọm kwem n’ihi na n ’enyo n’ ihu igwe, ụdị akụkọ a ga - abụ ihe na - akpa ike karịa na mbụ. Ma n'oge na-adịghị anya, amụtara m ịnụ ụtọ ịgụ ihe, n'ihi na ịkọ akụkọ na-ejide gị n'ụzọ miri emi. Ka o sina dị, akụkọ ahụ dị mfe ma ọ nweghị ebe ọ na-arapara ma ọ bụ na-awagharị.
N'ebe a na-akọ akụkọ, ihe abụọ masịrị m. Otu, uzo iji mechie ngalaba ma obu isi isi; ọzọ, ụzọ esemokwu ahụ na-esi amalite.
Anọwo m na-achọkwu Jason Rovin, m ga-achọkwa Nava ka ọ gbanwee àgwà ahụ n'ọdịnihu, na ọhụụ ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nyochaa: 'Grey Wolf', nke James Nava dere
Ekwenyere m n'echiche gị site na mmalite ruo na njedebe ma ana m agwa gị na okwu Sheriff Thorpe abụghị nke a na-akọ. James Nava anaghị ahapụ ihe ọ bụla na ohere. O nwere ihe mere ọ ga-eji gosipụta ọnọdụ na agwa ya, naanị ị ga-achọ ya wee chọta ya. Ọ bụ eziokwu na ọ na-akọ ala, ọdịnala, ọnọdụ dị iche iche dị ka onye ọzọ. Ọ bụ onye nkuzi na anyị ndị gụrụ akwụkwọ akụkọ ya niile mara nke a site na nkeji.
Kedu ka o si dị mma, aga m ede ya, enwere m adịghị ike pụrụ iche maka ọnọdụ a. M nwere ọla ntị Centaurs nke Desert site Alan Le May.
Ma ọ bụrụ na ị masịrị America na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu na ihe niile metụtara ndị India, aghaghị m ịkwado Crazy Horse na Custer: Parallel Lives of American Warriors Abụọ site n'aka Stephen E. Ambrose M ga-ahapụrụ gị nyocha nke blọgụ m ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị http://www.nachomorato.com/caballo-loco-y-custer/ Ọ gaghị ahapụ gị enweghị mmasị.
Akwụkwọ ọ bụla ọzọ na-adọrọ mmasị?
Ana m echere mbupu nke akwụkwọ ọhụrụ GRAY WOLF ... mana agụọla m ya ọtụtụ oge ... JAMES NAVA bụ ode akwụkwọ mara mma ... agwala m ya ọtụtụ afọ gara aga ... na ya, enwere m ike mee ihe nkiri magburu onwe ya ... Ebube mara mma ... nledo ..., nnukwu anụ ụlọ ... nnukwu ịhụnanya ... echetara m anụ ọhịa wolf .. nkịta buru ibu nke Robin ... m wee nọrọ ọdụ n'oche ochie na-ama jijiji ebe a na-azụ anụ ụlọ. ..nke ahu no na veranda..nke ahu bu na: O RUO NWA NILE ... EBERE M N’IME UMU M: M DI N’ANYA N’IME SWB RR R ROBIN ... N’ihi na James Nava na ede ihe nke oma. .. akwụkwọ akụkọ ya ... na ọ na - eme ka gị na ha biri ... na ugbu a enwere m ike ịgagharị ọnụ ụlọ nke Ranch ... belụsọ na mbipụta a ha emeela mgbanwe »» Na m ga-eti mkpu dị ka ndị enyi m Anụ ọhịa wolf… nakwa na m na-adụ gị ọdụ… na ị ga-azụ akwụkwọ ahụ… ị gaghị akwa ụta na ya….
Zaghachi montserret fernandezpacheco
Ajụjụ ọnụ nke onye nduzi nke Greenland Magazine, Ana Patricia Moya